Ukkaamsa shamarran Dapaachii: Gaddaa fi abdii kutannaa maatiiwwan Naayjeeriyaa - BBC News Afaan Oromoo
Ukkaamsa shamarran Dapaachii: Gaddaa fi abdii kutannaa maatiiwwan Naayjeeriyaa
2 Bitooteessa 2018
Goodayyaa suuraa Guyyaa kudhan dura Faatimaan hiriyaashee waliin Daapaachii keessa turte, amma garuu bakka isheen jrtu hinbeektu.
Shammarran 110 ta'an mana barumsaa ijoollee durbaa sadarkaa lammaffaa Daapaachii Naayijeeriyaa keessaa hidhattoota Islaamaa Bookoo Haraamiin erga fudhatamanii guyyoota 10 lakkoofsisaniiru.
Naayijeeriyaatti gaabaastuu BBC kan taate Isteefanii Heegaarti gara magaalaa Kaabaa biyyattitti argamuu deemuun mana barumsichaafi maatii ijooleen jalaa fudhatamanii argiteetti.
Dirreen mana barumsaa waccaa sagalee ijoollee durbaa 900 ol ta'aniin beekamu, har'a bakka namni irra jiraate hinbeekne fakkaachuun sagaleen kan irratti hindhagahamne ta'eera. Iyya re'ewwan daree barnoota duwwaa hafan keessa naanna'aniin guuteera.
Hintala ganna 13 kan taate Faatimaa Awaal daandii awwaaraan guutuu fi kophee shammarran mana barumsaa kanaa Wiixatarra Guraandhala 19 wayita baaqachaa turan gataniin guute bira darbuun gad deemaa jirti.
Hidhattoonni Bookoo Haaraam wayita mana barumsaa kana haleelanitti, hiriyaashee Zaaraa waliin kutaa cisichaa isaanii kan mana baruumsaa keessa turte. Irbaata nyaachuuf wayita qophaa'aa turanitti ture kan dhukkaasa dhagahan.
''Barsiisota keenya keessa tokko gadi baha nuun jedhe,'' kan jette Faatimaan, '' Wayita kana ture dhukkaasni qawwee samii keessatti kan argine.
Hidhattoonni kunneenis gara samii keessatti dhukkaasa dallaa mana barumsaa keenyaa kara achi aanuun as dhufaa turani.
''Nus fiiguu jalqabne, shamarrawwan hedduunis iyyaa turani,'' jetti Faatimaan. ''Gara karraatti fiigaa turre, hidhattoonni kunneenis akka nu dhaabbanuuf nutti dhukkaasaa turani. Nu isin gargaaru dhufne jechuun akka gara konkoolaata isaani keessa gallu nutti himaa turan, nuti garuu fiiguu keenya itti fufne.
Jarri haleelli nurraan gahan kunnenis, huccuu looltu uffatanii turan; garummoo millasanitti shebexee matattis shaashii kan marataniidha. Akka Bookoo Haaraam ta'an barteetti, haa ta'u malee shamarran biroon waan bitaa itti galuun isaanii waliin deemu danda'aniiru.
Haala kanaan Faatumaan utuu fiigaa jirtuu hiriyaashee of biraa dhabde. Hintalli ganna 14 Zaaraa Tijaanii Faatimaaf xiqqoo kan hangaftu ta'ullee, ganda tokko keessatti waliin kan guddatani fi mana barumsaattis ta'e wayita boqonnaa kan waliin dabarsan hiriyaa garaatti.
''Garaan kiyya guddo na gaddeera''
Xuubii dhoqqeerra kan hojjetame manni Zaaraa, qe'ee guddaa olla mana barumsaa Sanaatti kan argamuudha. Abbaan ishee qote bulaa fi geggeessa hawwaassa naanno sanaatti.
Guyyaa mana barumsaa sanarratti haleellaan baname dhukkaasa qawwee fi iyya ijoolee durbaa maatiin isaanii akka dhagahan abbaan ishee dubbatu.
Goodayyaa suuraa Maatiin Zaaraa Obbo Yuusufii fi Aadde Habiibaa Tijjaanii intala isaanii eeguutti onneen isaan cabdeetti
Wayita fiigee gara qe'eetti deebi'u ijooleen durbaa 100 ol ta'an manasaa biratti dahatanii arge.
Ijoolee sana keessa hintala isaa barbaadu yaalus argachuu hindandeenye, gafa bar'ius akka fudhatamte bare.